अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरमा डाईलासीस सेवा कहिले देखि ? « Tulsipur Khabar
अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरमा डाईलासीस सेवा कहिले देखि ?
लक्ष्मण विश्वकर्मा,तुलसीपुर,२२ फागुन ।
राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरमा डाईलासीस सेवा अझै पनि सन्चालनमा आउन सकेको छैन । अस्पतालमा मेसीन जडान भएको लामो समय वितिसक्दा पनि प्राविधिक समस्या तथा दक्षजनशक्तिको अभावका कारण अहिले सम्म पनि सेवा सन्चालनमा आउन नसकेको अस्पातलले बताएको छ ।
पटकपटक भाका सर्दै आएको अन्चल अस्पतालको डाईलासिस सेवा आगामी चैत १ गतेदेखी सन्चालनमा आउने भएको छ । दुई वटा डाक्टर र एक जना नर्सले यस सम्वन्धि तालिम लिईरहेको नासु नवेन्द्र गिरीले जानकारी दिएका छन् । अस्पतालमा डाईलासिस सेवा सन्चालनका लागी जेनेरेटरको समस्या तथा दक्षजनशक्तिको अभाव भएको अस्पतालका नायव सुब्वा गिरीले बताए । अस्पतालमा जेनेरेटर भएपनि उक्त मेसीन चलाउन कठिन भएकोे अस्पताल बताउछ ।
हतारमा सेवा सन्चालन गर्नुभन्दा दिर्घकालिन रुपमा भरपर्दो सेवा दिने गरी आबश्यक तयारी पुरा गरी सेवा सन्चालन गरिने अस्पताले बताएको छ । यस अघि गत पुस महिनामा डाईलासिस सेवा सन्चालन गर्ने भनिएको थियो । तर विभिन्न कारण देखाउदै उक्त समयमा सेवा सन्चालनमा आउन नसकेपछि फेरी फागुन महिना भित्र सन्चालन ल्याउने अस्पतालको तयारी भएको थियो ।
यसैविच जेनेरेटरको व्यवस्थाका लागी तुलसीपुर उपमहाहनगरपालिकालाई आग्रह गरेको नासु गिरीले बताएका छन् । सेवा सन्चालनमा आए पछि अस्पतालमा क्यान्सर विरामी र मृगौला विरामीहरुलाई उपचारमा सहज हुने भएको छ ।